ဒီလိုကလေးမျိုးကိုအားပေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီလိုကလေးမျိုးကိုအားပေးကြပါ
Posted by padonmar on May 10, 2011 in Creative Writing | 24 comments
ဒီသားလေးက ခြောက်တန်းကျောင်းသားလေးပါ။ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ကျောင်းစားရိတ်ရအောင် ညနေပိုင်းတွေမှာ သူ့အမေ ထုပ်ပေးတဲ့ သကြားမုန့်ဖက်ထုပ်နဲ့ ငှက်ပျောသီးမုန့်ကို လိုက်ရောင်းပါတယ်၊မနက်ပိုင်းကျတော့ အဖိုးနဲ့ အဖွားက တံပျက်စည်းလုပ်ပြီးသွင်းဘို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ သူပဲ လိုက်ဝယ်ပေးရပါတယ်၊ အဖေက ရေလှည်းတွန်းတယ်၊အမေက မုန့်လေပွေရောင်းတယ်၊သူရောင်းတဲ့ မုန့်ဖက်ထုပ်ကလည်းအမေ့ လက်ဖြစ်ပေါ့၊မောင်နှစ်မ ၈ယောက်မှာ သူကလေးက နံပါတ် ၅ ပါ၊
နေတာကတော့ မီးခွက်ဈေး လှိုင်သာယာတဲ့၊ ကျွန်မကတော့ ဒီလိုကလေးမျိုး ကိုအမြဲအားပေးပါတယ်၊သူကလေးကလည်း ဒီအလုပ်လုပ်တာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ပါပဲ။
(ပထမဓာတ်ပုံက ဓာတ်ပုံဆရာက ခင်ချိန်ကြာဆိုတော့ ကလေးခေါင်းပြတ်သွားပါတယ်၊ သူကလေးကလည်း အရမ်းသွက်တော့ ရောင်းပြီးတာနဲ့ သူ့မုန့်ထုပ်ကို မြန်မြန်သိမ်းတော့တာပဲ၊အေးသွားမှာလည်းစိုးလို့ပေါ့၊
ဒုတိယပူံချည်းပဲဆိုရင် ဘယ်က ကလေးပုံကြီးလာပြနေလဲ ထင်မှာစိုးလို့ ၂ပုံ တွဲပြီးပြလိုက်ပါတယ်၊)Child Labour လို့တော့ မပြောလောက်ပါဘူးနော်
ဒီကလေးမျိုးက ချီးကျူးစရာပါ။ အားပေးထိုက်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အလုပ်လုပ်တာမြင်တိုင်း (Child Labour) ကလေးလုပ်သား ဆိုပြီးပြဿနာလုပ်တဲ့ လူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုလဲ (ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ အဆင်မပြေ သူတွေကို ချနင်းတဲ့သူမျိုး) လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုတ်ချပါတယ်။
ဘယ်ကလေးမှ ပျော်လို့အလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ပါ။ မဖြစ်မနေလိုအပ်လို့ အလုပ်လုပ်ရတာ သာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအလုပ်မလုပ်ရ လို့တားမြစ်တာဟာ ကလေးနဲ့တကွ ကလေးမိသားစုရဲ့ စား ၀တ် နေ ရေး ကျန်းမာရေးတွေကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင် ပိတ်ပင်ရာရောက်ပါတယ်။ တချို့မူဝါဒတွေဟာ နားထောင်လို့ ကောင်းပေမယ့် လက်တွေ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်ပါ။
အဲဒီလိုကလေးလုပ်သားကိုပိတ်ပင်မယ့်အစား သင့်တော်တဲ့ စံနှုန်းတွေ ၊ စည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ပြီး အကာအကွယ်ပေးခြင်းသာ လက်တွေ့အကျိုးရှိမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီး ၀င်လာပါတော့မယ်။
eros ရဲ့ကွန်မန့်လေးကိုလည်း ဖတ်လိုက်ပါအုံးနော်၊ တော်ကြာနေ လူဖြူမြင်တိုင်း စီအိုင်အေထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး ထင်နေမှာစိုးလို့….
အဲဒီလို အဖွဲ့တွေ လူတွေရှိလို့ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိရင် နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတခု ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရင် တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ပါတယ်။
Ko Ko Aung ကို ထောက်ခံပါတယ်။သမာအာဇီဝ အလုပ်လုပ်ပြီး မိသားစုစီးပွားရေးကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီတာ အားပေးရမှာပေ့ါ။ ကလေးရဲ့ဘဝ ရှေ့ရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် ပညာရေး ကျန်းမာရေးတွေဘက်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ပဲပေ့ါ။
မြန်မာပြည်တလွှားမှာ အရွယ်မရောက်ကလေးငယ်ပေါင်း မြောက်မြာစွာတို့ဟာ ကိုယ်ဝမ်းရေးမိဘ၀မ်းရေးအတွက် အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်၊ လူကြားထဲ တိုးဝှေ့ပြီးငွေရှာကြရပါတယ်။ ဒါဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အင်္ဂရုပ်ပါ။
စနစ် က ဒီလိုကလေးတွေ လမ်းပေါ်အချိန်ကုန်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ အလားတူရှိကြပေမဲ့ ကမ္ဘယကလည်းသိ၊ အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေကလည်းကြိုဆိုကြလို့၊ လှူဒါန်းကူညီကြသူတွေမစဲပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုဝင်ကူညီကြရင်ဘဲ အနောက်ကအရိပ်လိုလိုက်ဟန့်တားနှောက်ရှက်သူတွေ ပေါများသလို၊ စင်ရှေ့ထွက်ချင်တဲ့ ပေါ်ပြူလာသမားတွေကြောင့် အကူအညီတွေ ထိရောက်သင့်သလောက် မထိရောက်ပါဘူး။
လမ်းပေါ်ခွက်ဆွဲ တောင်းရမ်းတဲ့ ကလေးတွေ၊ တစါစါနဲ့ မုန့်အစရှိသည်တို့ကိုလိုက်ရောက်ကြရသူလေးတွေ။ မခင်ရင်ခွင်ကမလွတ်သေးခင်မှာဒုက္ခကြီးငယ်ကိုတွေံကြုံကြရသူရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတွေ ကိုမြင်ရတိုင်း ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင်ခံစားရပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ကြည့်ရင် child labour နဲ့ working children ကို သေသေချာချာ ခွဲခြားမသိဘူးလို့ ထင်တယ်။
child labour ဆိုတာ ကလေးအလုပ်သမားဖြစ်ပြီး အဲဒီကလေးဟာ တနေကုန် မိုးလင်းကမိုးချုပ် အလုပ်ပဲလုပ်နေရပြီး ပညာသင်ကြားခွင့်၊ အပန်းဖြေခွင့်၊ကစားခွင့်၊ အနားယူခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေရသူ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခါ လုပ်ခလစာ ကို ပုံမှန်နှုန်းထားမရ ရှိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနီးဆုံးဥပမာဆိုရရင် မိုးလင်းက မိုးချုပ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အလုပ်အလုပ်နေရတဲ့ ကလေးများဖြစ်တယ်။ ၄င်းတို့မှာ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ အပန်းဖြေခွင့်၊ ကစားခွင့် နှင့်တကွ သတ်မှတ် အလုပ်ချိန်ထက်ကျော်ပြီးလုပ်နေရသလို၊ လုပ်ခလစာကလဲ လူကြီးများနှင့် အချိုးညီမရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ၄င်းတို့ သည် ပညာရေး ဆုံးရှုံးနေသောကြောင့် ၄င်းတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြီးစွာသော အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
working children အလုပ်လုပ်သောကလေးဆိုရင်တော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့ဗျာ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများမှာ မိမိရှင်သန်ရေး မိသားစုစီးပွားရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေသော ကလေးများရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်သောကလေးများ သတ်မှတ်ရာမှာ အဆိုပါကလေးငယ် သည်ပညာသင်ကြားခွင့်၊ ကစားခွင့်၊ အနားယူခွင့်၊ အပန်းဖြေခွင့် ရရှိပြီး အလုပ်လုပ်ရသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဘေးအန္တရာယ်များသော အလုပ်ခွင် မဟုတ်ရပါဘူး၊ လုပ်ခလစာသည်လည်း လူကြီးများနှင့် အချိုးတူရ ရမှာပါ။ အလုပ်ချိန်သည်လည်း သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်ဘောင်အတွင်းထဲမှာဖြစ်ရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဝန်ထမ်း မှ Child Law ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီးရှိပြီးသားပါ။
ကျွန်တော်လည်း ကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး စာချုပ်အကြောင်းရေးထားပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ထပ်ပြီးပွားလိုက်ပါဦးမယ် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ထားတဲ့ Child Law အရ ကလေးတဦးသည် တနေ့ ၄ နာရီ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အလုပ်ခွင်နဲ့ ပတ်သက်လို့က တော့ အပေါ်မှာ ညွှန်းပြထားပါတယ်။ သူတို့တွေ အခွင့်အရေးရအောင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေက ဥပဒေကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ဖို့ လည်းအရေးကြီးတယ်ထင်မြင်မိကြောင်းပါ။
အဲဒီလင့်တွေမှာလည်း သွားဖတ်ပေးပါလို့ ပန်ကြားပါတယ်။
လောကဓံ ကို အသက်ငယ်ငယ်နုနုလေးနဲ. ကြံကြံခံတာကို တော်တော်ချီးကျူးစရာကောင်းတာပါ ကျွန်တော် လဲ ကလေးတွေ ဈေးရောင်းတာ မြင်ရင် ၀ယ်ပြီးအားပေးတာပဲ.. အားပေးသင့်တဲ့ကလေးတွေပါ..
တကယ်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး လမ်းညွှန်တဲ့မိဘတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တချို့ဆို လွယ်လွယ်သူများဆီတောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး မိသားစုလိုက် တောင်းရမ်းစားသောက်နေတဲ့ လူမျိုးတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး အလုပ်လုပ်တာ မြင်ရတဲ့အတွက်လည်း ရိုးသားကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့ကလေးတွေ ရှိနေပါသေးလားလို့ ကျွန်မ တွေးမိ ကူညီချင်နေမိပါတယ်။
အသက်ငယ်ပေမယ့် မိသားစုကိုတဖက်တလမ်းကဝင်ငွေရှာပေးနေကြတဲ့ကလေးတွေပါ။မြန်ပြည်တလွှားသူတို့ လေးတွေလိုကလေးတွေအများကြီးပါ။အားလုံးကျောင်းနေအရွယ်လေးတွေပါ။ကလေးသူငယ်အလုပ်သမားဥပဒေကြီးကစာအုပ်ထဲမှာတော့ဖတ်လို့ ကောင်းသား။လက်တွေ့ မှာ ရေပေါ်အရုပ်ရေးနေသလိုပါ။သူတို့ လေးအတွက်စဉ်းစားပေးသင့်ပါပီ။
သမာအာဇီဝရှာစားတဲ့ မိဘတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေက ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေမှာ မိဘကိုဒီလိုနည်းနဲ့ ကူတတ်ကြတယ်။ မကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့မိဘတွေက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ကလေးတွေကတော့ ခိုးမယ်။လစ်မယ်။ဆိုတဲ့ နားရေ၀နေတဲ့ အလုပ်ကိုပဲ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားကြတာ။ ကလေးတွေ အလစ်သုတ်တာ၊ခိုးတာတွေ ကိုလည်းကြုံခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီကလေးတွေထက်စာရင် ဒီလိုကလေးမျိုးကို အားပေးသင့်ပါတယ်။
အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ထ မန်း လိုက်မိလို့ – နဲနဲ လုံးထွေးပြီး နဲနဲ များသွားတာ ၀န်ခံပါတယ်။
ကလေးသူငယ်တွေကို ခိုင်းကောင်းလို့ နိုင်လို့ရလို့ လုပ်အားခသက်သာလို့ လူမှုအရှုပ်အထွေးနည်းပါးလို့ တမင် ငှားခိုင်းတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘိနပ်ချုပ် ဗူးချိုး ကဲ့သို့ အလုပ်ရုံများ မှာ အလုပ်လုပ်ရ ခြင်းမျိုးကိုတော့ လက်မခံသင့်တာအမှန်ပါ။
မိသားစုအလုပ်ဆိုတိုင်းလဲ အန္တရယ်များတဲ့ မီးပွိုင့်မှာ ဂျာနယ်ရောင်း ပန်းရောင်းတာမျိုး ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေမယ့် ဘက္ထရီ ပြုပြင် အားသွင်းလုပ်ငန်း ဆေးဆိုးပန်း ရိုက်လုပ်ငန်း အမှိုက်သန့်စင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုး တွေမှာတော့ ကလေးသူငယ် တွေကိုမခိုင်းဘို့ တားမြစ်ရမှာပါပဲ။
“ဒါဆိုကျုပ်တို့ဘာနဲ့စားရမှာလဲ ” လို့ ဘုတောမယ့် မေးခွန်းမျိုး အတွက်တော့ အဖြေရှာထား ပြင်ဆင်ထား သင့်ပါတယ်။
သူတို့ကို ဆု တွေပေးပါတော့မယ်
ဟိုလိုဖြစ်သင့်တဲ့ ဆရာတွေ ဆရာမတွေရယ်
သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို Like or Dislike လေးတော့လုပ်ကြဘို့
ရွှေပုဇွန် ရှေ့မှာ ကျောင်းစပိတ်ကတည်းက တွေ့နေရတယ် ထီလက်မှတ် ရောင်းတဲ့ ကောင်လေးတွေ ကားပါကင် ကြည့်ပေးတယ်။ ထီလက်မှတ်ကတော့ ဈေးက ရှယ်ကြီးတယ်။ သူတို့ ဥပတိရုပ်ကြည့်တာနဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ မှန်း သိသာတယ်
eros ကွန်မန့်ကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ချို့ဟာ ပြည်ပအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေက အသံတွေနားထောင်ပြီး ကလေးသူငယ်အခွင့်၊အရေး ကလေးအလုပ်သမားဆိုပြီး အသံကောင်းဟစ်နေကြတယ်။ တစ်ချို့ကလေးတွေက မိဘကိုကူညီနေပေမယ့် အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်လို့
ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကလည်း ကျောင်းကပြန်လာရင် မိဘကို ဈေးကူရောင်းဘူးပါတယ်။
“ကလေးတွေ အလုပ်လုပ်တာမြင်တိုင်း (Child Labour) ကလေးလုပ်သား ဆိုပြီးပြဿနာလုပ်တဲ့ လူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုလဲ (ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ အဆင်မပြေ သူတွေကို ချနင်းတဲ့သူမျိုး) လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုတ်ချပါတယ်။ ”
ကျွန်တော့ ပထမ comment မှာပါတဲ့ အပေါ်ကစာသားဟာ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းရိုက်ရမ်းကားရာ ရောက်တဲ့အတွက် ပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်။ နစ်နာတဲ့ လူ / အဖွဲ့အစည်းများကို တောင်းပန်ပါတယ်။
ွှဲ့စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အရကြည့်လျှင် အတော် ကြံ့ခိုင်တဲ့ကလေးပဲ … ။ မျက်လုံးလေးက တောက်နေတာပဲ … ပျော့တီးပျော့ညံ့ အမျိုးစားထဲကတော့ မဟုတ်ဘူး …။ အများစုက မပြည့်စုံတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်အားငယ်ပြီး စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ကြရတယ်… ။ သူကတော့ လက်တွေ့သမားလေး ထင်ပါရဲ့ …အလုပ်ရှိလျှင် ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုတာ တထစ်ချယုံကြည်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားတယ် … ။ ကလေးလေးပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်က လေးစားဖို့ ကောင်းတယ်… ။
ွှဲစိတ်ဓါတ်ရေးရာ အရကြည့်လျှင် အတော် ကြံ့ခိုင်တဲ့ကလေးပဲ … ။ မျက်လုံးလေးက တောက်နေတာပဲ … ပျော့တီးပျော့ညံ့ အမျိုးစားထဲကတော့ မဟုတ်ဘူး …။ အများစုက မပြည့်စုံတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်အားငယ်ပြီး စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ကြရတယ်… ။ သူကတော့ လက်တွေ့သမားလေး ထင်ပါရဲ့ …အလုပ်ရှိလျှင် ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုတာ တထစ်ချယုံကြည်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားတယ် … ။ ကလေးလေးပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်က လေးစားဖို့ ကောင်းတယ်… ။
မျက်နှာမှာ သနပ်ခါးတွေဖွေးနေတာပဲ။ လည်ပင်းမှာ မရှိဘူး။ လက်မှာတော့ ကွတ်တိကွက်ကြား ကြည့်ရတာ သူ့ဘာသာ လိမ်းလာတဲ့ပုံ။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေမှ ၀ယ်သူက ၀ယ်မယ်ဆိုတာ ဘ၀ပေး အခြေအနေအရ သိပုံပဲ။ သူက နံပါတ်စဉ် (၅) ဆိုတော့ သူ့အောက်မှာ (၃) ယောက် အင်း…တော်တော် ငယ်ကြဦးမှာပေါ့။ စားအိုးကလည်း ကြီးဦးမှာ။
ယူအက်စ်က ကျောင်းတွေက.. ကလေးပိစိပေါက်စ..မူလတန်းလောက်ကတည်းက.. ကျောင်းက ဈေးထွက်ရောင်းခိုင်းနေပြီ..။
စစချင်းတော့.. အနီးအနားက မိတ်ဆွေတွေက သူရောင်းတဲ့ပစ္စည်း ၀ယ်ပေးတာမို့ .. လမ်းဘေးမရောက်ဘူးပေါ့..။
နောက်ပိုင်းတော့လည်း ..ဒီလိုပဲ ..လမ်းဘေးရောင်းတတ်သွားပါတယ်.။
တချို့ များ.. ၀လ်မတ်လိုစတိုးဆိုင်ရှေ့လူဝင်ပေါက်နားမှာ စောင့်ေ၇ာင်းကြတာ…။
အဲဒါမျိုးဆို.. မတန်မှန်းသိပေမဲ့..အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ၀ယ်ပေးကြတဲ့သူတွေများတယ်..။
ငွေကို ကျောင်းပြန်အပ်ရတာပေါ့..။ အဲဒီလိုနဲ့..သူတို့လေးတွေ..ငွေအကြွေတပြားစေ့အထိ..တန်ဖိုးထားတတ်သွားတာပဲ..။
မြန်မာပြည်က..ဒါမျိုးတွေလေ့လာပြီး.. ပညာရေးမှာ ပြင်ဆင်သွားဖို့ကောင်းတယ်..။
…(ကလေးတွေ အလုပ်လုပ်တာမြင်တိုင်း (Child Labour) ကလေးလုပ်သား ဆိုပြီးပြဿနာလုပ်တဲ့ လူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုလဲ (ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ အဆင်မပြေ သူတွေကို ချနင်းတဲ့သူမျိုး) ….
ကိုပြောချင်ပါတယ်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စားဝတ်နေရေးက စ စဉ်းစားရပါမယ်၊ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခလေးတွေကို မလုပ်နဲ့ဆိုရင် သူတို့ကိုဘယ်သူကထမင်းလာကြွေးမှာလဲ၊ နိုင်ငံခြားမှာလို နိုင်ငံတော်ကလည်း မထောက်ပံ့နိုင်ပါ၊ မလုပ်ချင်တာကို အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းနေတာဆိုရင်တော့တားသင့်ပါတယ်၊ အခုတော့ခလေးတွေကလည်း မိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့လုပ်ချင်တယ်၊ ခိုင်းတဲ့သူကလည်း ဈေးသက်သာလို့ခိုင်းချင်တယ်၊ ကြားထဲမှလူကြီးမင်းများက ခလေးကခလေးများကိုသနားသောအားဖြင့် မခိုင်းရဟုဆိုလျှင် အဆိုပါစားဝတ်နေရေးမပြေလည်သောခလေးများကိုသနားသောအားဖြင့် စာရင်းကောက်ပြီး ထောက်ပံ့သင့်ပါကြောင်း….။
hello.,frd..,so good article it is! We,Myanmars really need to provide necessary aid for them,especially for their education and living.He isagood son of good parents.He is so poor ,but he is active and hard-working to do such small work to support his family.It shows 12- year-old boy’s honesty and responsibillity.I am so proud of him.I am sure that he will beagood and duty conscious man when he grows up.